Ajajawwanii bafata kana keessaa foormulaawwan gulaaluuf fayyadu. Ajajawwan bu'uura dabalatee, (fakkeenyaaf, qabeentoota jalteessuu) dalagaawwan murtaa'oo Herregduu LibreOffice kunis iddooqawwan ykn dogongorootaf barbaachisutu jira.
Filannoo gara gabatee muraatti jalteessuu fi haqa.
Filannoo gabatee muraatti jalteessa.
Qaree gara malkata ittaanutti siqsi (gara mirgatti).
Qaree gara malkata duriitti siqsi (gara bitatti).
Qaree gara dogongora ittaanutti siqsi (gara mirgatti siqsiisa jira).
Qaree gara dogongora duriitti siqsi (bitatti siqsiisa jira).
Title is: Gulaali